USergey Pritula wabonisa ukuthi umkakhe wehla kanjani isisindo ezinyangeni eziyisithupha ngemva kokubeletha - Bonisa Ibhizinisi 2022
USergey Pritula wabonisa ukuthi umkakhe wehla kanjani isisindo ezinyangeni eziyisithupha ngemva kokubeletha
Umethuli we-TV u-Sergei Pritula waqhosha ku-Instagram blog yakhe ngesithombe somkakhe othandekayo uCatherine, owabeletha indodakazi yakhe uSolomiya ezinyangeni eziyisithupha ezedlule.
U-Sergei Pritula wachitha ukuphumula kwakhe kwasebusika okwase kulindelwe futhi okwakumfanele ezindaweni ezifudumele. Kanye nomkakhe, izingane kanye nomshana, umethuli wachitha izinsuku ezimbalwa e Sharm el-Sheikh libalele.
Ekhasini lakhe le-Instagram, u-Sergey akakwazanga ukukhuluma kuphela ngokuthi impelasonto yakhe yahamba kanjani, kodwa futhi wabelane ngezithombe ezicacile zohambo.
Kanye nomndeni wakhe, ungumsingathi wephrojekthi ethi "Passion for the Inspector" nethi "Who Is above?" ukujabulele ukubhukuda olwandle, ukuvakasha kanye nokuhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni ezikhangayo zasendaweni.
Futhi, u-Pritula akazange aphuthelwe ithuba lokubonisa isibalo somkakhe othandekayo. Ezinyangeni eziyisithupha ezedlule, uKaterina wabeletha indodakazi ehamba phambili uSolomiya. Manje intombazane ibukeka imangalisa.
Lokho vipadok, uma kungekho ukulungisa ngaphandle amagajethi. Awu, kuthathe, ezinganeni
- wabhala kumazwana ngaphansi kwesithombe uSergei Pritula.